बाह्रबिसेवासी भन्छन्, ‘कोरोना रोक्न सरकारको काम अझै अपर्याप्त’ - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बाह्रबिसेवासी भन्छन्, ‘कोरोना रोक्न सरकारको काम अझै अपर्याप्त’
बाह्रबिसेवासी भन्छन्, ‘कोरोना रोक्न सरकारको काम अझै अपर्याप्त’
Sindhu Khabar सोमबार, २०७७ जेठ ५ / २१:१६
कोभिड १९ बाट नेपालमा पहिलोपटक सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका ९ स्थ्ति राम्चेकी एक् २९ वर्षिया महिलाको निधनपछि नगरमात्रै नभई सिंगो जिल्ला नै त्रासमा छ । सुत्केरी रहेकी उक्त महिलाको निधनपछि अहिले बाह्रविसे रउनको माइती रहेको बलेफी गाउँपालिकाका केही वडा शील गरिएको छ । र, मृतक महिलासँग सम्पर्कमा रहेकाहरुको र स्थानीयको स्वाब संक्लन गर्ने क्रम जारी छ ।
स्थानीयमा चेतनाप्रवाह गर्नका लागि नेपाल सरकारका मातहतका विभिन्न निकायले पहलकदमी गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण नहोस् भन्ने हेतुले स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय सरकार मात्रै नभई संघीय र प्रदेश सरकारसमेत लागिपरेको अवस्था छ । बाह्रविसे र राम्चेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी बुद्धिजीवी पनि कोरोना फैलन नदिन सक्रिय छन् । र पनि स्थानीयवासीमा सन्त्रास अझै उस्तै छ ।
यो अवस्थामा सरकार अनि सरोकारवाला अन्य निकायले यो क्षेत्रमा कोराना संक्रमण फैलन नदिन कत्तिको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् उनीहरुको काम स्थानीयवासीलाई कत्तिको सन्तोषजनक लागिरहेको छ । अनि, अब सरोकारवाला निकायले के गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा सिन्धुपाल्चोकबाट सञ्चालित न्यूजपोर्टल सिन्धु खबर डटकमले त्यहाँका स्थानीयसँग विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया लिएको छ ।
केही स्थानीयले सरोकारवाला निकायले राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । केहीले अझै नपुगेको र यत्तिले पर्याप्त नभएकाले थप पहलपदमी लिनुपर्ने जनाए । अधिकांशको आवाज अझै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको थियो । केहीले सरोकारवाला निकाय गैरजिम्मेवारसमेत रहेको प्रतिक्रिया दिए । केहीले भनेका छन् कि सरकारले केही गरेन । हामीले स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजिवी, कवि, व्यवसायी, शिक्षक अनि राजनीतिज्ञसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौं ।
हेरौं कस्ले के प्रतिक्रिया दिए । जस्ताको तस्तै ।
बाह्रबिसे नगरपालिका वडा ९,राम्चे
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले शिल मात्रै घोषणा गरेर भएन्, तत्कालै संक्रमितको सम्पर्क र आसपासका क्षेत्रमा तीव्र रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा मन्त्रीसहित जनप्रतिनिधिको सक्रियता देखिन्छ । योभन्दा अझ राम्रो गर्नको लागि यह“ाको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन जरुरी छ । तैयारी अझै पर्याप्त पुगेको देखिदैन् । यहाँको प्रमुख बजार बाह्रबिसेमा बाहिरबाट आएका प्रत्येकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्छ ,अनि मात्रै नियन्त्रण हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तिनै सरकारले यसलाई गंम्भिर रुपमा लिन जरुरी छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका राम्चे
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले हाम्रो गाउदेखि अन्य जिल्लामा दुई जनालाई खोसिसकेको छ । विश्व त्रसित बनाइरहेको भाइरसको केही ओखती फेला परेको छैन् । यसलाई रोक्न हरंसम्भव प्रयास भइरहेको छ । गाउ“मुखी अलि नभएको पाइएको छ,गाउ“बारे केही सोच्ने हो की ? संक्रतिम देखिएपछि मात्रै गाउ“मा परीक्षण अभियानलाई चर्काइएको पाइयो । अरुबेला पनि यो मुद्धालाई लिएर सरकारले पूर्व योजना र गतिविधि बनाउन आवश्यक छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका, ठोट्नेरी
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणकै कारण यह“ा र अरु जिल्लाको गरी दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारले गाउ“देखि बजारक्षेत्रबासीको स्वास्थ्यबारे सुचना लिन जरुरी देखिन्छ । सरकार बजार केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ । संक्रमित देखिएपछि मात्रै सरकार गाउ“ उक्लिएको छ । यस्तो किन ? सरकारले सामान्यदेखि माथिल्लो तहसम्मका स्थानीयको हरेक गतिविधिबारे जानकारी राख्नुपर्छ अनि सबै विषयमा जानकारी लिएपछि नियन्त्रणको लागि सहज हुन्छ । क्रियाकलपाक र तैयारीको लागि अझै सरकारले कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बलेफी गाउँपालिका ८
कोरोनो भाइरस को कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि स्थानीय त्रसित हुनु स्वभाबिक कुरा हो । यसपछि सरोकारवाला निकाय ले जुन तदारुकता देखाएको छ त्यो आफैमा सकारात्मक पक्ष छ तेसैले गर्दा सरकार जनताको सुरक्षामा काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ तर यतिले मात्र पर्याप्त भने छैन । सम्बन्धित स्थान मा पुर्ण रुपमा सिल गरि अहिले पहिलो चरणमा मृतक सङ्ग सङ्लग्न ब्यक्तिहरुको स्वाप सङ्कलन गरि परिक्षण गर्ने काम भैरहेको छ र बाकी कोको सङ्लग्न भयो तेसको पहिचान तथा तथ्यांक सङ्कलन हुदैछ यसरी हेर्दा सकारात्मक देखिन्छ अब यश भेगका सबै जनताको कोरोना परिक्षण गरि सबैजनालाई सुरक्षीत भएको महसुस दिलाउनु ढिला गर्नु हुदैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ । हामी सबै घरमा बसौ आफू बाचौ र समुदायलाइ सुरक्षीत बनाऔ धन्यवाद ।
मानिस पहिचान खासै गरेको देखिएन अन्य त उस्तै भैगयो , आमसमुदायको चाहना चाहिँ कसैलाई नदेखियोस तेहि जित्छ सरकारले त केही नगर्ने रहेछ भन्ने कन्फम भो ।
दिनहु बढिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले राम्चे र बाह्रबिसे क्षेत्रका हरेक नागरिकको सामान्य स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन जरुरी छ । अनि मात्रै के भइरहेको भन्नेबारे थाहा हुन्छ । यहाँका सामान्यभन्दा सामान्य सडक मजदुरदेखि व्यवसायी,कृषक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य अन्य समस्याबारे पनि बुझ्न जरुरी छ । आहिलेसम्म स्थलगत पुग्नुभएको मन्त्री,पूर्वमन्त्रीसहित जनप्रतिनिधिको टोलीले गर्नुभएको चासोप्रति स्थानीय आभार छन् । यो पछिसम्म जारी रहोस् । यह“ाका शंकास्पद र अन्य सबैको पिसिआर परीक्षण गरियोस् ।
त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका
वास्तबमा संक्रमित को मृत्यु भएपछि एउटा आतंक नै फैलिएको साच्चिकै हो, तुरुन्तै प्रदेशका मन्त्रीहरु समेत स्वास्थ टोलि लिएर गाउँमा आएर घरपरिवार को चेकजाँच गर्नुनै प्रहिलो कदम हो ,जुन भइरहेको छ!र परिवारलाई नै नेगेटिभ भएपछि हामी वारिपारीकालाइ थोरै भएपनि राहत महसुस भएको छ,तर ढुक्क हुने अवस्था छैन ३-४ हप्ता पछि एसको लक्षण देखापरेको प्रमाण हरुपनी छन। हामी सबै सतर्क हुन जरुरी छ र तिनै तहका सरकारले द्रुत गतिमा परिक्षण गराउन जरुरी छ। र अर्को कुरा जो बालबालिका कोरोनाको कारण टुहुरा हुन जान्छन् उनीहरुको सम्पुर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,हुर्काउन ,बढाउन ,पढाउन र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न।
बाह्रबिसे नगर राम्चे
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले गर्दा बाध्य गरिएको लकडाउन अवधी चुनौती र अवसर दुवै हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने बाटो धेरै छन् । भाइरस रोक्ने सवालमा सरकारले बृहत योजनामा होमिनुपर्छ । गाउ“देखि बजारक्षेत्रका प्रत्येकको सामान्य स्वास्थ्य विवरण लिएर अध्ययन गरिनुपर्छ । संक्रमित क्षेत्रलाई शिल गरेर अन्य परीक्षणलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । निश्चित दुरी कायम गर्ने, साबुनपानीजस्ता अभियान त चलिरहेका छन् ।
बाह्रबिसे नगरपालिका कल्लेरी
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न हालसम्म गरिएको काम सन्तोषजनक देखिएको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थलगत सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर जानपर्ने आवश्यक देखिन्छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाबाहेकको पनि परिक्षण गरेमात्रै नियन्त्रणमा सहज हुनेछ । यसबारे महत्वपूर्ण योजना बनाउने हो की ? स्थानीय तहले अन्य कुरामा भने कस्सिरहेको पाइएको छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका मानेश्वारा
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको डरले गर्दा सबैलाई मानसिक र शारिरीक रुपमा व्यापक समस्या परिरहेको छ । सरकारले घरमै बस भन्ने हो भने सबै हाम्रो स्वास्थ्यबारे जानकारी घरबाटै लिनपर्छ की पर्दैन् । घरमै परीक्षणको व्यवस्था गरियोस् । अरु सबै काम सन्तोषजनक गरिरहनुभएको छ । अझ भरपर्दो बनाउन सबै क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै अवस्थाबारे निरीक्षण आवश्यक छ ।
संक्रमित महिलाको परिवारको रिपोर्ट त नेगेटिभ आएको छ तर ढुक्क हुने अवस्था छैन्। सम्भावित व्यक्तिहरूको नमुना लिन अलि ढिला भएको देखियो।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले गर्दा एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय त्रासमा छन् । उनीहरुमा मानसिक तनाव खेप्नुपरिरहेको छ । त्यसको अनुभवी हामी पनि हौ । हाम्रो प्रष्ट परीक्षण तत्कालै गरिनुपर्छ , परामर्श सचेतनाको तत्कालै व्यवस्था गरियोस् । तत्कालै किटनाशक स्प्रे गरियोस् । स्थानीय तहले अन्य सरकारस“ग मिलेर चालिरहेको कदम प्रशंसायोग्य नै छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका रातमाटा
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणलाई फैलिन नदिन राम्चे र बाह्रबिसे बजारक्षेत्रबारे आवश्यक सुचना लिन जरुरी छ । उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षण गर्ने काम त भइहाल्यो ,अन्य आसपासको गाउ“मा पनि व्यापक परीक्षण गराइनुपर्छ । सुरक्षाकर्मी,स्वास्थ्यकर्मी र संञ्चारकर्मीमा यो समस्यालाई गंम्भिर रुपमा हेरेर परीक्षण अभियान गरियोस् । गाउ“ र बजारमा कोरोना भाइरस रोकथामको लागि व्यापक रुपमा घरदैलो अभियान चलाइयोस् । सरकारले अझै योजना बनाउन जरुरी छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका पलाती
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले गर्दा समस्या परेको सरकारले जानकारी लिनपर्छ की पर्दैन् । घरमै बस भनेपछि घरमै परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । गाउ“मा खास कदम चालिएको देखिदैन् ।किटनाशक स्प्रे गरिनुप¥यो । स्थानीयलाई बाहिर बोलाएर परीक्षण गरिने हो भने सुरक्षित बनाउन गरिएको लकडाउनको परीभाषा मिल्दैन् ।
केही भएको छैन सकेसम्म नेता देखि मन्त्री सम्म आएर हेरेको भए पनि परिक्षण को दायरा पनि बढाउन सकेको छैन , थप स्वास्थ सामाग्री बाट जनता सुरक्षीत पनि छैनन ।
जब मिर्तककै परिवार को नेगेटिभ आयछ । सतर्क रहु तर आत्तिन किन पर्यो
केही पनि नभएको महसुस गरियो , आफै बचे बचियो तर सरकारले केही नगर्ने रहेछ भनेर पुष्टि भो ।